नेपालमा ३ जनाकाे मृत्युपछि मात्रै कोरोनाको पुष्टि — Sanchar Kendra
नेपालमा ३ जनाकाे मृत्युपछि मात्रै कोरोनाको पुष्टि
काठमाडौँ । धुलिखेल अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भएको तीन दिनपछि भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका बाँकेका युवाको मृत्यु भएको त्यही दिन बेलुका र बाराका वृद्धको स्वाब लिएको ११ दिनपछि तथा मृत्यु भएको ९ दिनपछि मात्रै कोरोनाको पुष्टि भएको हो । मकर श्रेष्ठले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
बाराका ७० वर्षीय एक वृद्धमा दाहसंस्कार गरेको आठ दिनपछि मात्रै सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजको आईसीयूमा उपचारका क्रममा उनको जेठ ४ मा मृत्यु भएको थियो । उनको त्यही दिन नै दाहसंस्कार गरिएको थियो । जेठ २ मा भर्ना गरेर उनको त्यही दिन स्वाब निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । स्वाब निकालेको ११ दिनपछि मात्रै उनको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका २५ वर्षीय युवाको पनि मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । मृत्युपछि स्वाब निकालेर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना देखिएको थियो । ती युवा वैशाख ३० मा भारतबाट आएका थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेको पाँच दिनसम्म पनि उनको कोरोना परीक्षण भएको थिएन । यतिसम्म कि उनलाई झाडापखाला र ज्वरोले सिकिस्त हुँदा पनि अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्ससमेत नपाएको आफन्तको गुनासो छ । उनी मटैयास्थित दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा थिए ।
मृत्युपछि मात्रै कोराना पुष्टि हुनेमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे–९ की २९ वर्षीया सुत्केरी पनि हुन् । उनको मृत्यु भएको तेस्रो दिनमा मात्रै कोरोना पुष्टि भएको हो । जेठ १ को राति १० बजे मृत्यु भएकी उनको ३ गते राति ८:५० मा मात्रै सरकारले उनको मृत्यु कोरोनाले भएको सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो १२ दिनमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । गुल्मीका शिक्षकबाहेक तीन जनामा मृत्युपछि मात्रै कोरोना लागेको पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मृत्यु भएकाको क्लिनिकल विश्लेषण गरेर पूर्ण विवरण तयार भइरहेको बताए । ‘कोभिडले हामीलाई झुक्याइरहेको छ । लक्षण देखिँदैन । अरू स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई आफ््नै पुरानो समस्याबाट ग्रसित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारणले कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन । उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ढिला पुग्छन् । परीक्षण गरेर उपचार गर्ने बेलासम्म समय घर्किसकेको हुन्छ ।’ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएका र केही रोगले ग्रसित बिरामीलाई कोरोनाले च्याप्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामीलाई जोगाउनुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक सागर राजभण्डारीले अस्पतालमा आउने सबैजसो बिरामीलाई शंकाको घेरामा राखेर तत्काल स्वाब लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै अस्पतालले बिरामीलाई शंकाका रूमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी अस्पताललाई पनि स्वाब संकलन गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ यो व्यवस्थाले पीसीआर गराउन सर्वसाधारणको पनि पहुँच विस्तार हुने उनको भनाइ छ । पहुँच नभएकै कारण कोरोना संक्रमित बढिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।
हालसम्मका मृत्यु भएका चारमध्ये तीन जनाको मृत्युपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । ‘यो तथ्यले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध र तदारुक नभएको पुष्टि हुन्छ,’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘सक्रमितको नतिजा जति ढिला भयो । त्यति नै संक्रमण फैलिँदै जान्छ । यसले महामारीको रूपमा लिन सक्छ । सरकार र सम्बन्धित विभागमा रहेका पदाधिकारी यसतर्फ संवेदनशील भएको देखिएन ।’ प्रयोगशालामा प्राविधिक नभए करारमा लिएर भए पनि चाँडो नतिजा निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘स्वाब निकालेको ११ दिनमा रिपोर्ट आउनु भनेको लापरबाहीको पनि पराकाष्ठा हो,’ उनले भने, ‘यो सामान्य कुरा होइन, छानबिन हुनुपर्छ ।’ रिपोर्ट दिनमा नभई निश्चित घण्टाभित्रै दिनेगरी जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
डा. अधिकारीले मृतकमध्ये एकको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । बारामा मृत्यु भएका वृद्धको वीरगन्जमा परीक्षण गरिएकोमा शंका लागेर थप परीक्षण गर्न काठमाडौं ल्याउँदा रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोसी अस्पताल, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशाला, हेटौंडास्थित किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा कोरोना परीक्षण हुन्छ । यसबाहेक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रूपन्देहीस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, नेपालगन्जको भेरी अस्पताल, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा समेत पीसीआर परीक्षण गरिन्छ ।
तर, पनि रिपोर्ट आउन एक सातासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोमबार कोरोना पुष्टि भएको काठमाडौं टोखाका दुई जनाको स्वाब बुधबार संकलन गरिएको थियो । उनीहरूको रिपोर्ट ६ दिनपछि सोमबार मात्रै आएको हो । संक्रमित देखिएको कालिमाटीका दुई जना प्रहरीको रिपोर्ट पनि ६ दिनपछि मात्रै आएको थियो । ‘बेलैमा रिपोर्ट नआएपछि नेगेटिभ होला भन्ने बुझ्यौं । नियमित ड्युटी पनि गरिरह्यौं । आवश्यक सतर्कता पनि अपनाएनौं,’ संक्रमित एक प्रहरीले भने, ‘बेलैमा रिपोर्ट आएको भए हाम्रो कारणले अरू संक्रमित हुने थिएनन् ।’
टोखा नगरपालिकाले ३ सय जनाको कोरोना परीक्षण गरेकोमा एक साता हुँदा पनि एक सय ५० को मात्रै रिपोर्ट आएको नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताए । भक्तपुर अस्पतालले पनि स्वाब संकलन गरी पठाएको एक साता हुँदा पनि टेकुबाट रिपोर्ट नआएको जनायो । शंकास्पद व्यक्तिलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको हुन्छ ।
यस्ता बिरामीको रिपोर्ट एक सातासम्म नआउँदा नयाँ बिरामी भर्ना गर्नसमेत नसकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । ‘संक्रमितको आशंकामा भर्ना गरेर राखेका हुन्छौं । तर, रिपोर्ट आउनै एक साताभन्दा बढी लाग्छ,’ भक्तपुर अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘पुरानो बिरामीले गर्दा अर्को बिरामी लिन सकिँदैन । यदि संक्रमित रहेछ भने पनि ढिला रिपोर्ट आउँदा थप संक्रमित बढाइरहेका हुन्छन् ।’
अवस्था झन तनाबग्रस्त बनेपछि बर्दिबासमा बिहानैदेखि कर्फ्यु लगाइयो, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
महोत्तरीमा प्रहरीको गो’ली लागेर एक जनाको मृत्यु, सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइयो
राजकुमार घिमिरेको गिरफ्तारी बिरुद्ध चौतर्फी बिरोध, तत्काल रिहा गर्न माग
इराकबाट आयो दुखद खबर, हेर्नुहोस बिस्तृतमा